Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > ဒုသမ္မတ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ဒုသမ္မတ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	ဝေစန္ဒာ	| သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၇ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ့မှ တင်သွင်းလာမည့် ဒုသမ္မတသည် ဖွဲ့စည်းပုံမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ မရှိ စိစစ်နိုင်ရန် လွှတ်တော်တရပ်စီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီကို ကြာသပတေးနေ့တွင် ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟု လွှတ်တော်တက် အမတ်များကပြောသည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဘက်မှ ဦးဋ္ဌေးဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ဘက်တွင်မူ ဦးဇော်မြင့်ဖေတို့ကို ရွေးချယ် ခဲ့သည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းသန်းက ပြောသည်။ "လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်မယ့်သူမရှိလို့ ဒုသမ္မတ စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား ဦးဋ္ဌေးဦးဖြစ်သွားတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်က ဦးဇော်မြင့်ဖေကို ရွေးထားတယ်။"ဟု ဦးဝင်းသန်းက ပြောသည်။သမ္မတ အရည်အချင်းများ စိစစ်ရေးအဖွဲ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် နှစ်ရပ်တို့မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦးစီနှင့် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီ၊ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်အမတ်တဦး စုစုပေါင်း ၇ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်။ "ဒီအဖွဲ့က ဒုသမ္မတကို ဖွဲ့စည်းပုံပါ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိ မရှိစိစစ်ပြီးရင်ဘောင်ဝင်တယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ကို တင်တဲ့အခါ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးရမှာပါ။" ဟု လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။လစ်လပ် ဒုသမ္မတ နေရာအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေကို တင်သွင်းရန်ရှိသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း လွှတ်တော်အတွင်း တရားဝင် အဆိုပြုခြင်း မရှိသေးပါ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ၏ အရည်အချင်းများအဖြစ် အနည်းဆုံးအသက် ၄၅နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်၊ စစ်ရေးအမြင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်၊ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်မှ အနည်းဆုံး အနှစ် ၂ဝ နိုင်ငံတော်တွင် နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ရမည် စသည့် သတ်မှတ်ချက် ၇ချက်ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေ အသစ်ပြဋ္ဌာန်း	ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲ ပိတ်ပေးရန် သူရဦးရွှေမန်း ကတိပြု	ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ	ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ အတည်ပြုမည်	မူးယစ် ဘိန်းစာရွက်မှုများ မွန်ပြည်နယ်တွင် စတင်ဖမ်းဆီးနေ	စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြလိုသူများ ခွင့်ပြုမိန့်မရ	ကာချုပ်ရုံးရှေ့တွင်ပါ စစ်ရပ်စဲရေး ဆန္ဒပြမည် Who is Online
We have 208 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved